Ity Politika Cookie ity dia manazava hoe inona ny mofomamy ary ny fomba fampiasana azy ireo. Tokony hamaky ity politikanao ity ianao hahalalanao ny mofomamy, ny fomba fampiasana azy ireo, ireo karazana cookies izay ampiasaintsika i.e, ny fampahalalana azonay amin'ny fampiasana mofomamy sy ny fomba fampiasana izany sy ny fomba hifehezana ny tiana cookie. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fampiasana izany, mitahiry ary mitazona antoka ny angon-drakitrao manokana, jereo ny politikantsika momba ny fiainana manokana.
Azonao atao ny manova na oviana na oviana ny fanekenao avy amin'ny Fanambarana Cookie ao amin'ny tranokalanay.
Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, ary mahazo ny fomba anaovan'ilay tranokala sy hamakafaka izay miasa sy izay ilana fanatsarana.
Ahoana ny fomba fampiasana cookies ?
Toy ny ankamaroan'ny serivisy amin'ny Internet, Ny tranokalanay dia mampiasa cookies cookies ho an'ny antoko sy ny antoko fahatelo ho an'ny tanjona maromaro. Ny mofomamy voalohany ho an'ny antoko dia ilaina amin'ny fampandehanana ny fomba tsara, ary tsy manangona data momba anao izy ireo.
Ny mofomamy fahatelo an'ny tranonkala dia ampiasaina matetika mba hahafantarana ny fomba tantaran'ny tranokala, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.